Izinto eziluncedo nezingalunganga kwiijenreyitha ezintsha zelogo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UMelisa Perrotta | | Idizayini yeMifanekiso, ILogos
Abaqulunqi banamhlanje bajongene neparadigm yotshintsho olukhawulezileyo kunye namandla. Ukuphucula umsebenzi wethu ngokhuphiswano olunokwenzeka kubalulekile ukuba wazi iintsingiselo zetekhnoloji. Ke, izixhobo ezitsha ezinje nge logo abavelisi.
Ngale ndlela, kule minyaka imbalwa idlulileyo sizibonile izicelo kunye namaphepha ewebhu aqala ukufumana intengiso yokudala iilogo ezinzima. Ezo ndawo zivumela iingcali ezingayiyiyo ukuba zifumane iilogo ezenziwe ngokungakhethiyo kuzo ngokusebenzisa iinkqubo zekhompyutha. Ngamanye amaxesha kunokufunyanwa kamva kwiinguqulelo ze-SVG kunye ne-TIFF ngaphandle kokwenza ntlawulo. Abanye eImizekelo yezi zixhobo zezi: Simahla Akukho mlinganiselo, UMarkMaker, Iimpawu zoThungelwano, Canva y IBrandMark.
1 Isebenza njani iijenreyitha zombane
2 Ukungancedi kwabaqulunqi:
3 Izibonelelo zabayili:
Isebenza njani iijenreyitha zombane
Ezi ndawo zisekwe kwi- Ukusetyenziswa kwee-algorithms ezidibanisa iinkqubo zoyilo zemveli, apho iconography kunye ne-typography zihlala zidityaniswa.
Kuxhomekeka kwiphepha elisetyenzisiweyo, inkqubo inokwahluka ngokwamanqanaba alandelayo:
Kuqala umsebenzisi ufake igama lenkampani yakhe, umbutho okanye inkampani. Emva koko chaza ukuba leliphi icandelo elikwishishini lakho kunye nesiqubulo sakho.
Emva koko khetha imibala kunye neefonti ezifanelekileyo kwisitayile osifunayo. Emva koko khetha ii-icon ocinga ukuba ziya kuchonga uphawu. Emva kwexesha Inkqubo idibanisa idatha engenisiweyo evelisa iindlela ezininzi yeemveliso ezinxulumene nezitayile ezikhethiweyo.
Okokugqibela, umthengi unokunika "ukuthanda" kukhetho aluthandayo ukuze inkqubo iqhubeke ngokuvelisa izinto ezintsha ngokungenasiphelo ide ifumane efanelekileyo.
Izitayile ze logo zokukhetha
Iindidi zee icon
Ngokuqinisekileyo Ingxaki ngezi zixhobo zintsha zikwifayile yazo ukufikelela ngokulula kunye nokusetyenziswa. Ngale ndlela, ibenza bagqibelele kubathengi abanokubakho babaqulunqi bokwenyani, oko kukhokelela kwingxaki enkulu ngakumbi. Ngenxa yoko, asilahleki kuphela ngamathuba emisebenzi, kodwa amaxabiso entengiso yoyilo lwe logo ayancipha ngenxa yemithetho yonikezelo kunye nebango.
Singazama ukubona amathuba esi sixhobo esisibonelela ngawo, sijonge imeko ngobuchule obuncinane kunye nokreqo.
Ngaphandle kwamathandabuzo ii-logo zejenreyitha zisebenza kakuhle kakhulu ukuvelisa izindululo ezininzi ngokukhawuleza. Bayasivumela ukuba sifumane ukhetho ngemibala eyahlukeneyo, ngokuma kwezinto ezahlukeneyo kunye neefonti ngonqakrazo olunye. Nangona kunjalo, ukucamngca kunye nomgangatho weesemos weelogo ezivelisiweyo phantse azikho. Ngale ndlela ingxaki inokuxhatshazwa ngabaqulunqi. Umzekelo, kwimeko ye kufuna ukungenisa iziketshi ezininzi khawuleza kwaye ucacise ukuba umthengi ufuna ntoni. Okanye ngokulula njengendlela yokuphefumlelwa okanye ukujonga kwangaphambili uyilo onalo engqondweni. Emva kwexesha kuya kufuneka ugqibelele kwaye wenze ngokwezifiso uyilo olunye lokugqibela, usebenze ngale ndlela ngendlela efanelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Iijenreyitha ezintsha zelogo: izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga
Ezo zinto zivelisa iilogo ezonyanyekayo, hayi ngengqondo yokuba zikunika i icon okanye isitayile esingenanto yakwenza nenkampani yakho, kodwa uninzi lweelogo zimbi zide zaze zazehlela iinyembezi.
UMelisa Perrotta sitsho
Molo! Enkosi kakhulu ngengcaciso yakho. Ngokuchanekileyo into ephakanyisiweyo yile nto uyikhankanyayo. Ezi jenreyitha zivelisa iilogo ezikumgangatho ophantsi kakhulu kwaye elona candelo lilibi kukuba abasebenzisi bazisebenzisa njengemveliso yokugqibela. Ngesi sizathu, kucetyiswa ukuba kunokwenzeka, nokuba ungakanani na umgangatho wabo, ukuba ukuxhaphaze oku kungalunganga endaweni yethu.
Phendula uMelisa Perrotta
Ndingumyili kwaye ndinxulumene nelizwe le-geek kunye neetekhnoloji ezintsha: Ubukrelekrele bokwenziwa, ukufunda ngomatshini, njl.
Ngokucacileyo abo banika iilogo ezikumgangatho ophantsi kakhulu, kodwa kufuneka sikhumbule ukuba itekhnoloji ikhula ngokuxhumaxhuma kunye nemida, abaqulunqi boku abacingi ukuba bakwizandla ezinqamlezileyo ukuba ababoni ukuba zingaphuculwa njani ezi nkonzo.
Ke umsebenzi we-logo yoyilo osemncinci unokuchaphazeleka kakhulu, ngaphandle kokuba ulawule indlela yakho yokugqithisela ekubeni ngumyili owaziwayo.
Andilwi nobuchwephesha obutsha kwaye yeyiphi enye njengomyili kukubona ukuba singazisebenzisa njani okanye sibone ukuba yeyiphi indlela yokuvula ngezi teknoloji.